Fiakaran’ny faktiora tsy mahazatra : Tafapetraka ireo ivotoerana handray ny fitarainan’ny mpanjifa | JIRAMA
Fiakaran’ny faktiora tsy mahazatra : Tafapetraka ireo ivotoerana handray ny fitarainan’ny mpanjifa
Misokatra manomboka androany 06 Jolay ireo ivotoerana manokana handray ny fitarain’ny mpanjifa izay niharan’ny fidanganan’ny faktiora. Ahitàna izany avokoa ireo masoivohon’ny JIRAMA miisa enina eto Antananarivo.
Mampihatra avy hatrany ny toromarika avy amin’ny Filan-kevim-pitantanan’ny JIRAMA, mikasika ny fametrahana kioska manokana handraisana ireo mpanjifa niharan’ny fiakaran’ny faktiora tsy mahazatra ny Direksiona Jeneraly. Nisy androany 06 Jolay ny fidinana ifotony notanterahin’ny Tale Jeneraly Vonjy Andriamanga tao amin’ny masoivohon’ny JIRAMA Ambatonakanga :
– Efa am-perinasa ny kioska manokana handraisana sy hamahana ny olan’ireo mpanjifa voakasiky ny fidanganan’ny faktiora na ny fahadisoan’ny tarehimarika, ka amin’ny 7 ora sy sasany maraina ka hatramin’ny 11 ora atoandro ny ora fandraisana ny mpanjifa.
– Natao laharam-pahamehana manerana ireo masoivoho enina eto Antananarivo ny fandraisana ireo mpanjifa ireo, izany hoe tsy milahatra.
– Raha misy fahadisoan’ny mariky ny fandaniana (index) dia miroso amin’ny fanitsiana izany ny JIRAMA mba hahafahana mamoaka ny tena faktiora.
– Araka ny toromariky nomen’ny Tale Jeneraly dia tsy maintsy voavaha eo noho eo ny olan’ny mpanjifa.
Nanatitrantitra tamin’ireo mpiasa eo anivon’ny masoivoho ny Tale Jeneraly fa nahemotra hatramin’ny faran’ny volana ny fe-potoana fandoavana faktiora fa tsy folo andro toy ny mahazatra intsony.
Ny JIRAMA dia miantso an-tanan-droa ireo mpanjifa amin’ny fifanatonana, azo atao ihany koa ny miantso ny laharana maitso 3547.